कसरी मिनी पट्टी आफैलाई बनाउनुहुन्छ?
हामी अक्सर हाम्रो हातमा घरमा सहजता सिर्जना गर्न चाहन्छौं। यो धेरै मा लागू हुन्छ: गहनाको सिर्जनाबाट फर्नीचर र इलेक्ट्रोनिक्सको स्वतन्त्र विधानमा। र सच्चाइ हो, जब तपाईं आफैलाई केहि गर्नुहुन्छ, यो धेरै कम खर्च लाग्छ, र परिणाम मात्र तपाईं र तपाईंको प्रयासमा निर्भर हुनेछ। जस्तै व्यवहारले सुझाव दिन्छ , यो धेरै रमाइलो र प्रभावकारी हुन्छ। त्यसोभए, आज हामी मिनी पट्टी कसरी बनाउन सक्नेछौं कि हामी आफ्नै हातहरु सँगै ताकि यसले आन्तरिक, वातावरण र हाम्रो आफ्नै मूडमा बस्छ।
"बार" को रूपमा यस्तो अवधारणा दृढतापूर्वक स्थापित भएको छ र अमेरिकाको लागि धन्यवाद विश्वभर प्रयोग गरिएको छ। यो त्यहाँ थियो कि सार्वजनिक अल्कोहल पेय पदार्थका मालिकहरू पहिलो थिए भनेर बुझ्न चाहन्थे कि तिनीहरूले पैसा कमाउन सकेन भने उनीहरूले आफ्नो हातमा एक बियर संग सहज कुर्सियोंमा लामो समयसम्म बसाए। आगामी फेब्रुअरी अमेरिकिहरूले आगामी तथा पेयहरू बीचको नाममा अवरोध राखेका छन् र सहज कम स्टूलहरूको सट्टा तिनीहरूले उच्च कुर्सियोंका सट्टामा लामो समय सम्म बस्न असम्भव थियो किनभने मानिसहरूले पेय आदेश दिए, छिटो छोडेर नयाँ ग्राहकहरूलाई मुक्त गरे।
समयको समयमा, "बाधा" शब्द अप्रचलित भएको छ र आधुनिक व्यक्तिले मात्र "बार" को अवधारणामा प्रवेश गरेको छ। मूल नामको साथमा, नियुक्ति परिवर्तन भयो। वर्तमानमा, पट्टी यति धेरै संस्था छैन जहाँ तपाईं पेय गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि त्यहाँ घरको विशिष्ट क्षेत्र हो जहाँ विशेषता पेय भण्डारण गरिन्छ। यो एक उज्ज्वल र एकै समयमा व्यावहारिक गृह विवरण हो, घरको कल्याण देखाउँदै।
तपाईले मिनी पट्टीलाई आफ्नै हातमा राख्नु अघि, यो किसिमका प्रजातिहरू यो निर्धारित गर्न सार्थक छ कि:
एक स्थिर पट्टी, जुन यसको स्थायी स्थान छ, तपाईले सँधै सम्बोधन गर्नुहुनेछ यदि तपाई घरमै धेरै अतिथिहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ भने। यस्तो पट्टी प्रायः सम्पूर्ण कोठामा राख्छ र विशेष फर्नीचर, पेय पदार्थका लागि बर्तन र ककटेलहरू सिर्जना गर्ने, शराबको लागि ठूलो संख्यामा र फ्रिज, फ्रिज र शोकेसहरू समावेश गर्दछ।
मोबाइल पट्टी, वा अन्यथा एक मिनी पट्टी, इकट्ठा गर्न सकिन्छ यदि कसैले यी उद्देश्यहरूको लागि सम्पूर्ण कोठा आवतित गर्न सक्दैन। प्राय: प्राय: एक मिनी-बार एयर कंडीशनिंग प्रणालीसँग मिल्दो हो जुन अल्कोहल पेय पदार्थ भण्डार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो फर्निचर स्टोरमा खरिद गर्न सकिन्छ वा स्वत: सुधारिएको सामग्रीबाट। तथापि, एक सानो विश्लेषणको साथ, यो सबै निष्कर्षमा आउनेछ कि दोस्रो विकल्पको लागि दुबैले राम्रो हुन्छ, किनकी यो सस्तो छ र यस अर्थमा अधिक सुविधाजनक छ कि तपाई कसरी यो हेर्न सक्नुहुन्छ र जहाँ हुन सक्नुहुनेछ।
व्हीलहरूमा एक पट्टी मोबाइल पट्टीको भिन्नता हो। यस्तो यन्त्र केही बन्द ठाउँमा भण्डारण गर्न सकिन्छ र केवल आवश्यक रूपमा हटाउन सकिन्छ। यो मिनी पट्टी सीमित ठाउँको साथ घरका बासिन्दाका लागि उपयुक्त छ, तर वास्तवमा त्यस्तो आविष्कार गर्न चाहानुहुन्छ।
मिनी बार कहाँ छ?
यदि तपाईंले अझै निर्णय गर्नुभयो कि तपाइँलाई मोबाइल पट्टीको आवश्यकता पर्दैन, र स्टेरिटिकल होइन, त्यसपछि अर्को रेखामा यो स्थान कहाँ छ। यहाँ तपाईंले आफ्नो सबै कल्पना समावेश गर्नुपर्छ र घरमा रोचक ठाउँहरूको खोजीमा जानुहुन्छ, जसमा तपाईं सैद्धान्तिक रूपमा मिनी पट्टीको स्थान लिन सक्नुहुनेछ। यो हुन सक्छ:
छत अन्तर्गत स्थानहरू;
पर्खालमा अप्रयुक्त आला;
सीराहरू अन्तर्गत नचाहिएको ठाउँ;
बालकनी वा लगगिया।
विस्तारमा अध्ययन गर्नु अघि तपाईंको हातले घरको लागि मिनी पट्टी कसरी बनाउने, तपाईलाई एक स्थान उठाउन आवश्यक छ ताकि भविष्य मिनी पट्टी पुरा तरिकाले फिट रहन्छ र सम्पूर्ण कोठाको भित्रमा पुग्छ।
कुनैपनि व्यवसायमा पहिलो चरण सधैँ योजना बनाइन्छ। हामीले निर्धारित गर्न आवश्यक छ, पहिलो, भविष्य मिनी-बार को बनाइनेछ र यो के हुनेछ, र दोस्रो, हामी यो मा भण्डारण गर्नेछौं।
तपाईं मिनी पट्टी काठ, पुरानो चेस्टहरू वा ड्ररर, प्लास्टिक वा बढी विदेशी सामग्रीबाट बनेको आफ्नै हातहरूसँग गर्न सक्नुहुनेछ: एक कार्टबाट पीवीसी पाइप वा पाङ्ग्राहरू। धेरैले मिनी पट्टीको लागि सामग्रीको रूपमा मेटल डिब्बे प्रयोग गर्छन्। तर यो विकल्प मानिसहरूको लागि अधिक उपयुक्त छ, किनभने यस्ता पट्टीहरू प्राय: गेराजमा राख्छन् - दोस्रो घरमा।
आन्तरिक को यो रोचक भाग बनाउन को लागी विचारहरु विशाल छन्। यसैले, तपाईं केहि zadumok उधार ले, घर को लागी लेख फोटो मिनी बारहरू हेर्न, र तिनीहरूलाई आफ्नो अभ्यास गर्न अनुवाद गर्न आफ्नै हात।
समान पट्टीको आकार पनि फरक हुन सक्छ। एक ठूलो दराज देखि माथि सम्म दस बोतलों को क्षमता संग, एक ठूलो रैक मा। मुख्य कुरा यसलाई उच्च गर्नु हुँदैन र मोबाइलको सट्टा एक स्थिर पट्टी बनाउनु हुँदैन।
मिनी-बारको सभा तपाईको हातमा
यहाँ हामीलाई हाम्रो डिजाईमरको भित्री चाहिन्छ कि कुन कुराले फिट राख्छ, ताजा र नयाँ देखिन्छ। सभाको प्रक्रिया अझ बढी बुझ्न योग्य छ, तपाइँलाई निर्दिष्ट उदाहरणको लागि विचार गर्न आवश्यक छ। मिनी पट्टीले आफ्नै हातको साथ कुनै पनि सामग्रीबाट इकट्ठा गर्न सकिन्छ, तर हामी बैरलमा रोकिनेछौं। हो, साधारण असामान्यबाट असामान्य मोबाइल पट्टी गर्न सम्भव छ।
हामीलाई आवश्यक पर्दछ: एक काठको बैरल, काठको बार, पेन र सबै आवश्यक उपकरणहरू।
तपाईंको आफ्नै घर मिनी-बार संकलन गर्ने प्रक्रिया आफ्नै हातमा सरल छ। यो मात्र आवश्यक छ:
बैरल राख्नुहोस् यसको छेउमा।
ढोकाबाट एक ढोका पर्खालहरू मध्ये एक मा काट्नुहोस्।
लूपको मद्दतले, काटिएको काठको टुक्रा आधारमा राख्नुहोस् ताकि ढोका बन्द हुन्छ।
काठको बारहरूबाट बोरलमा बोतलहरू र चश्माहरूको लागि अलमारियाँ बनाउँदछ।
ह्यान्डललाई ढोकामा संलग्न गर्नुहोस्।
यदि वांछित भए, परिणाम उत्पादन जारी गर्नुहोस्। तपाईं प्यान्ट, सजावटी टेप वा स्टिकर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
एक रैक निर्माण गर्न मिनी पट्टी स्थित हुनेछ। यो काठ वा धातु सलाखों बाट बनाइयो।
कुनै पनि व्यक्तिले मिनी-पट्टीलाई फोटोमा आफ्नै हातमा पार्न सक्छ, यसैले घरको क्षेत्र र घर सजावट गर्न सक्छ।
एक मिनीबार भरेर?
धेरै कारणहरुका कारण धेरै मानिसहरु विश्वस्त छन् कि यदि उनीहरूको मिनी पट्टी छ जसमा तपाईं ककटेल रोक्न सक्नुहुन्छ, तपाईले निश्चित रूपमा विभिन्न प्रकारका विभिन्न अल्कोहल पेय पदार्थहरू भरिन सक्नुहुनेछ। यद्यपि, गलत छ।
केवल केहि आधारभूत र सबै भन्दा लोकप्रिय र आवश्यक विकल्पहरू खरीद गर्न पर्याप्त हुनेछ: क्लासिक वोडका, सिग्नेक, ब्रान्ड र रक्सी। यसको अतिरिक्त, तपाईले सँधै स्याउ, खट्टे र अङ्गुरको रस, कोक, स्ट्रबेरी सिरप र क्रीमको धेरै लिटर भण्डार गर्नुपर्छ। जब तपाईं ककटेलहरू बनाउनुहुन्छ, तपाईले केहि व्यावसायिक उपकरणहरू पनि आवश्यक पर्दछ:
शकर - विशेष मिश्रण ग्लास;
Strainer - लुग र बर्फ को एक ककटेल देखि अलग गर्न को लागि एक चलानी;
बार चम्मच - एक लामो चम्मच;
तपाईंलाई चश्माको धेरै किस्महरू किन्न आवश्यक छैन, केवल तीन पर्याप्त हुनेछ: रोक्स, हाईबल र शराब चश्मा।
यसरी, हामी घरमा हाम्रो आफ्नै हातमा मिनी पट्टी बनाउन कसरी सिक्यौं, यसको लागि प्रबन्ध गर्नुहोस् र हाम्रो आफ्नै सुविधाको लागि आवश्यक चीजहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।
निस्सन्देह, मिनी पट्टी सधैँ व्यावहारिक स्थिर सलाखहरूमा उपस्थित हुनेछ, तर हाम्रो विचारमा उनीहरूको तुलना गर्न अनुमति छैन। तिनीहरू विभिन्न उद्देश्यको सेवा गर्छन्, पूर्ण फरक कार्यहरू गर्छन्, र मूल्यमा धेरै फरक पनि।
मिनी बार एक रोचक र व्यावहारिक चीज हो जुन तपाईं आफ्नै हातमा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ र यसैले एउटा नयाँ विवरण गृहमा ल्याउन सक्दछ।
घरबाट प्लास्टिकबाट क्रोम कसरी हटाउने: सुविधाहरू र प्रभावकारी तरिकाहरू
सिलाई मेशिन कसरी सुचारु गर्ने: कार्य निष्पादन नियमहरू
आफ्नै हातले काम गर्ने ड्रिप-प्रकारमा भित्ताहरू: रेखाचित्र
के मापदण्ड अनुसार छनौट गर्न: बच्चाहरु को लागि नृत्य स्कूल?
माफिया 2: थपिएको (औपचारिक वा छैन)
वा विरुद्ध: Pimafutsin गर्भावस्था को समयमा?
Mikhailovsky Artillery सैन्य अकादमी (MVAA): ठेगाना, संकाय, समीक्षा
तात्तुआ पुष्किना: एक सफल महिला को जीवनी
अभिनेत्री वेरा Sotnikova: जीवनी
एक विज्ञान वा जादू - Alchemy के हो? प्रसिद्ध alchemists
भौतिक मा अतिरिक्त-CURRICULAR गतिविधिहरु। भौतिकशास्त्र मा परिदृश्य extracurricular गतिविधिहरु